Mutungamiri weTanzania: Nhamba yekutanga yevashanyi mushandirapamwe muAfrica
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » African Tourism Bhodhi » Mutungamiri weTanzania: Nhamba yekutanga yevashanyi mushandirapamwe muAfrica
African Tourism Bhodhi • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Hurumende Nhau • Hospitality Industry • nhau • Kuvakazve • Tanzania Breaking News • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Trending Now • Akasiyana Nhau
Achiratidzira kuratidzira kushanya kweTanzania pasirese, Mutungamiri weTanzania Samia Suluhu Hassan arikutenderera nedunhu rekuchamhembe revashanyi, achitungamira kupfura firimu rezvinyorwa pane akakosha uye epakutanga masayiti anokwezva.
Iyo documentary ichavhurwa muUnited States kana yapera, yakanangana nekushambadza nekuratidzira nzvimbo dzinoyevedza dzevashanyi veTanzania pasirese.
Mutungamiri Samia akataura kuti iyo Royal Tour zvinyorwa zvicharatidza zvakasiyana kushanya, kudyara, hunyanzvi uye zvetsika zvinokwezva zviripo uye zvinoonekwa muTanzania.
Vatambi vakakosha muindasitiri yekushanya uye yekugamuchira vaeni vanofara.
Mushure mekutanga Royal Royal firimu zvinyorwa muSpice Island yeZanzibar mukupera kwaNyamavhuvhu, iyo Mutungamiri weTanzania akaita rumwe rwendo rwekushanya rwevashanyi mudhorobha reBagamoyo pamhenderekedzo yeIndian Ocean. Guta renhoroondo revashanyi reBagamoyo riri makiromita makumi manomwe neshanu kubva kuDar es Salaam, guta guru reTanzania.
Yaimbova dhorobha rekutengesa varanda, Bagamoyo ndiyo yekutanga yekupinda mamishinari echiKristu kubva kuEurope makore angangoita zana nemakumi mashanu apfuura, ichiita iro diki diki nhoroondo kuva musuwo wekutenda kwechiKristu muEast Africa neCentral Africa.
Musi waKurume 4, 1868, maCatholic Holy Ghost Madzibaba vakapihwa chidimbu chenzvimbo yekuvaka kereke uye imba yemamongi nevatongi vemunharaunda yeBagamoyo vachitungamirwa naSultan weOman aive mutongi weZanzibar.
Basa rekutanga reKaturike muEast Africa rakagadzwa muBagamoyo mushure mekutaurirana kwakabudirira pakati pemamishinari echiKristu ekutanga nevamiriri veSultan Said El-Majid, Sultan Barghash. Vatungamiriri vaviri vakakurumbira ava vaive vatongi vekare veTanzania yanhasi.
Basa reBagamoyo rakavambwa muna 1870 rekugara vana vakanunurwa kubva muhuranda asi rakazowedzerwa kuenda kuchechi yeKaturike, chikoro, mashopu echikoro chehunyanzvi, uye zvirongwa zvekurima.
Mwenje, Kamera, Chiito!
Zvinyorwa zvinotungamirwa neMutungamiri Samia Suluhu Hassan zvakagadzirirwa kusimudzira nzvimbo dzekushanya dzekuTanzania kune vateereri vepasirese kusimudzira ruzivo rwekufamba mushure mekunge hupfumi hwenyika hwaparadzwa zvakashata nemhedzisiro yedenda re COVID-19.
“Zvandiri kuita kusimudzira nyika yedu Tanzania pasi rose. Tiri kuenda kunzvimbo dzemafirimu ekukwezva. Vanogona kuisa mari vanozoona kuti Tanzania yakadii chaizvo, nzvimbo dzekudyara, uye nzvimbo dzakasiyana dzekukwezva, ”Samia akawedzera.
Mutungamiri weTanzania zvino ave kutungamira vashandi vemafirimu muNgorongoro Conservation Area Authority (NCAA) uye Serengeti National Park mushure mekuita zvimwe chete paGomo reKilimanjaro, gomo refu muAfrica.
Dzese Ngorongoro neSerengeti ndiwo mapaki epamoyo anotungamira eTanzania anokweva zviuru zvevashanyi vematunhu nevekunze gore rega. Aya mapaki maviri ekutanga evashanyi anoverengerwa senzvimbo dzinonyanya kushanyirwa muEast Africa, kunyanya nevashanyi vemusango safari.
Ngorongoro Conservation Area yakaziviswa nzvimbo yeUNESCO World Heritage saiti muna 1979 nekuda kwemukurumbira wayo pamwe nekukanganisa kwepasirese pakuchengetedza uye nhoroondo yemunhu sekunyorwa nemasayendisiti akasiyana siyana mushure meakakurumbira anthropologists Mary naLouis Leakey vakawana dehenya raMurume wekutanga kuOlduvai Gorge.
Iko kukwezva kukuru kweNgorongoro Conservation Area ndiyo inozivikanwa nyika kushamisika - Ngorongoro Crater. Iyi ndiyo gomo rakakura kwazvo risina kuputika uye risina kuputswa pasi rose rakaumbwa pakati pemakore maviri nemamirioni matatu apfuura apo gomo guru rakaputika rikawira roga. Iyo crater, iyo yava nzvimbo inoshanyirwa nevashanyi uye magineti kuvashanyi vepasirose, inoonekwa senzvimbo yekugara yezvisikwa zvinogara pazasi pemadziro ayo akareba-tsoka-2 anoipatsanura nenzvimbo yese yekuchengetedza.
Serengeti National Park inozivikanwa nekuda kwekusunganidzwa kwayo kwemhuka dzesango, chinokwezva zvikuru kuve Great Wildebeest Migration pamapani ayo, ichiendesa anopfuura mamirioni maviri emhuka dzemusango muzororo rechisikirwo muMaasai Mara. Serengeti National Park iri pakati penzvimbo dzekare dzekuchengetedza safari mu Africa nekusangana kwayo nemhuka dzesango, kunyanya mhuka hombe dzemu Africa.
Iyo Great Migration inoumbwa nemapoka akakura anokwana kubva pamamiriyoni maviri kusvika kumamirioni matatu emombe, mbizi, uye mhara dzinofamba mumakiromita mazana masere emakiromita nemawadhi kuburikidza neSerengeti neMaasai Mara ecosystem mukutsvaga mafuro akanaka uye kuwana mvura. Aya mafuro anoteverwa neshumba uye nezvimwe zvikara muzviuru, uye anomirirwa nemoyo murefu nemakarwe muMara neGrumeti Rwizi sezvo mapoka acho achitevera kambasi yemukati.
Yakagadziridzwa nemahotera emazuva ano evashanyi uye dzimba dzekugara, Bagamoyo ikozvino paradhiso inokura nekukurumidza pamhenderekedzo yeIndian Ocean mushure meZanzibar, Malindi, neLamu.